Maxay Cunnada Eyga u leedahay Midabaynta Cuntada | Martech Zone
Maxay Cunnada Eyga u leedahay Midabaynta Cuntada
Sabtida, Oktoobar 28, 2006 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Seth Godin ayaa wax ka qoraya khalkhaliyeyaasha iyo abuuraha Dilbert Scott Adams ayaa wax ka qoraya wax is daba marinta.
Maalin kasta, waxaa jira macno ahaan boqolaal wakaalado xayeysiis ah oo si adag u shaqeynaya, isku dayaya inay ogaadaan sida loogu leexiyo fikradaha shirkadaha nidaamka iyadoo loo maleynayo inay tahay mid guri lagu sameeyay iyo mid dhab ah.
Seth wuxuu layaabaa goorta ay siyaasiyiintu bilaabayaan faragalinta baraha bulshada… Waxaan u maleynayaa inuusan maqal in Katherine Harris ay horeyba isugu dayday bogeeda markii shaqaaluhu faallooyinka ugu horeeya (sifiican ugula socdo iyaga cinwaanka IP ee muwaadin feejigan) .
Hadday rabitaan xor ahi jiro, maxay musharixiinta ugu dhaadheer ee timaha ugu fiican had iyo jeer ku guuleystaan ​​doorashooyinka?
Ma hubo haddii aad waligaa maqashay "koofiyad madow" oo ka soo horjeedda "koofiyad cad" mashiinka wax lagu raadiyo, laakiin waa kala duwanaanshaha mowduucan. Black Hat SEO waa khalkhalgelinta makiinadaha raadinta si loogu helo meeleyn iyada oo loo marayo habab aan run ahayn. White Hat SEO waa injineernimada nuxurka si loo hagaajiyo meelaynta Mashiinka Raadinta si loo hagaajiyo natiijooyinka ganacsiga. Ujeedada labaduba waa in la wanaajiyo meelaynta raadinta… laakiin koofiyad cad ayaa samaynaysa maxaa yeelay waxay u malaynayaan inay habboon tahay in meelaynteeda la helo.
Jawaabtayda u kuur-galinta Seth iyo faallooyinka Scott labadaba waa in dadku ay yihiin, inta badan, jaahil. Waxaan ku kalsoonahay waji, ur, nooc, gacan-qaad… midab. Dhamaan saameyntan dibadeed waxay kicinayaan shucuur gudaheena ah. Suuqyayaashu waxay rajeynayaan in isku-darka saxda ah ee shucuurta ay noo horseedi doonto inaan wax iibsanno. Marar dhif ah ayaan isku dayeynaa inaan qabanno shaqada adag si aan runtii wax u fahanno. Hadaad runti rabto inaad qof ka iibiso wax cariiri ah, usheeg sida ay noqon doonto dareemaan, maahan sida ay u shaqeyso.
Paris Hilton iibinta hamburgers.
Verizon oo gadaya 'shabakadooda kumanaan' gadaashaada (waxaan jeclaan lahaa inay ka dambeeyaan miiska halkii)
Nascar iibinta UPS Shipping
Heck, xitaa waad kala soo bixi kartaa heesaha aad ugu jeceshahay ganacsiga 'Tide commercial at the Goobta Mawjadaha! Ha i aaminin? Waa tan mid:
[maqalka: https: //martech.zone/audio/tidesong.mp3]
Waa isla sababtaas sababta cuntada eeyga ay u leedahay midabaynta cuntada. Eeyaha waa indhoolayaal midab ha u arkin midabada sida aadamuhu u arko. Midabku kuma daro dhadhan iyo nafaqo. Miyaanay macaamil ahaan ahayn in shirkadda cunnada eeyga ay ku darto midabaynta cuntada eeyga cunnadiisa maaddaama ay tahay shirkad inay sameyso soo gudbinta foyg ee Digg? Xaqiiqdii waa… laakiin xaqiiqda ayaa ah in dadku iibsadaan maxaa yeelay 'waxay u egtahay mid wanaagsan'. Ayaa doonaya inuu waqti siiyo si uu u hubiyo dhabarka xirmada waxyaabaha dufanka ku jira, maaddooyinka macmalka ah, maaddooyinka dabiiciga ah… badankeen annagu ma nihin.
Ilaa iyo inta ay ku jirto faa iidada ku-talagalinta dadka ama teknoolojiyadda, koofiyadaha madow had iyo jeer way ag joogi doonaan si ay uga macaashaan.
API… Yaa dhisaya APUI?
Oktoobar 30, 2006 at 8:36 PM
Waxaan ka iibsan lahaa hamburger ka Paris waana ujeedka loo daro, infro fiican
Feb 13, 2008 markay ahayd 9:16 PM
eeyaha MAAHA midab-indhoolayaal.
Waad ka dhigi laheyd hadalkaaga adigoon tusin nacasnimadaada adoo sheegaya in eeyadu ay ku tiirsan yihiin dareenkooda ur, in ka badan aragga, sidaa darteedna midabaynta cuntada ay tahay oo keliya inay ka dhigto cunnadu mid ka qurxoon iibsadaha. Waxaan isku dayayaa inaan halkaan cilmi baaris ku sameeyo, laakiin Internetku maahan meel fiican taas maadaama nacas kasta oo doqon ah uu qori karo maqaal khadka tooska ah.
Feb 13, 2008 markay ahayd 11:27 PM
Waxaad seegtay barta boostada - eeyga cunnadiisa midab uma leh eeyga, waxay u midab tahay bini'aadamka iibsashada. Haa, eeyadu way arki karaan qaar ka mid ah midabada.
Waxaan rajeynayaa in maalin uun akhlaaqdaadu ay la jaan qaadi karto awoodaada aad ku bixin karto faallo waxtar leh.
Waad ku mahadsan tahay joojinta,